बलात्कार अभियुक्त सिद्धबाबाको सफाइमा माथिकै मिलेमतो - Nepal's No.1 News portal
काठमाडौं- बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको १० दिनभित्रै जिल्ला अदालत सुनसरीले उनलाई इज्जतपूर्वक सफाइ कसरी दियो ?
उच्च र सर्वोच्चमा समेत पुगेको यति गम्भीर मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एक्लैले यति ठूलो जोखिम लिन सक्छन् ? न्यायिक प्रक्रियामा उठेका प्रश्नहरू भन्छन्, ‘सिद्धबाबालाई उन्मुक्ति दिने यो प्रक्रियामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला एक्ला छैनन्, देशको सिंगो प्रणाली परिचालित भएको छ ।’
निरौलाको यो भनाइले नै ‘फिक्सिङ’मा फैसला भएको स्पष्ट पार्दछ । पहिलो विषय, सिद्धबाबाको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कथित सिद्धबाबालाई थुनामै राख्नु भनेर आदेश दिएको १२ मंसिरमा हो । तर, जिल्ला अदालतमा २२ मंसिरमा पेसी तोकिएको थियो ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भन्ने सर्वोच्च र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि थाहा थियो । तर, काठमाडौंबाट सुनसरी मिसिल पठाउन २४ घन्टा पर्याप्त छ ? एक दिनमा जिल्ला पुग्न सक्ने मिसिल किन यतै रोकियो ?
यो प्रश्न हामीले बिहीबार राति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीलाई सोधेका थियौं । उनले त मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नआएको र फर्काउनुपर्ने विषय नै नरहेको स्पष्ट पारे ।
‘मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात् सिद्धबाबाका पक्षधरले उच्च र सर्वोच्चमा निवेदन हाले । निवेदन सर्वोच्चमा आएपछि मुद्दाको मिसिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि हेर्नुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा हामीले उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत कागजपत्र मगायौँ । सोही आधारमा हामीले सर्वोच्चमा बहस गर्‍यौँ,’ रेग्मीले भने, ‘सर्वोच्चले निजलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनू भन्ने आदेश दियो, यो विषयले सर्वाेच्चबाट किनारा पनि पायो । तर, त्यसको अर्थ हामीले मिसिल फेरि विराटनगर पठाउनुपर्छ भन्ने होइन । किनकि विराटनगरमा हामीले पूर्ण मिसिल मगाएका होइनौँ । आवश्यक कागजात मात्र मगाएका हौँ । त्यो पनि फोटोकपी मात्र हो । फोटोकपी फिर्ता गर्नु पर्दैन ।’
उता मिसिल नभएकाले पेसी सार्न भन्दै निवेदन दिने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल उच्च सरकारी कार्यालय पठाएको जनाएको छ । जब सर्वोच्चमा मुद्दा लड्नसमेत फोटोकपी भए पुग्छ भने उच्च अदालतमा मुद्दा लड्न किन मूल कपी नै पठाइयो ? फोटोकपी किन पठाइएन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ ।
यो विषयमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘२२ मंसिरमा जुन दिन सुनसरी जिल्ला अदालतमा सिद्धबाबाको मुद्दा फैसला भयो त्यस दिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल नभएको साँचो हो । किनकि मुद्दा उच्च अदालतमा पनि भएकाले त्यहाँको सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मिसिल आवश्यक थियो । तर, उहाँहरूले पनि आवश्यक कागजपत्रको फोटोकपी मात्र मगाएको भए पनि हुन्थ्यो ।’
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीको इनरुवामा छ भने उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटगरमा छ । यो दुई कार्यालयको दूरी जम्मा २९ किलोमिटर छ । तर, २९ किलोमिटर परबाट मिसिल ल्याउन नसकेर सरकारी वकिलको कार्यालय किन पेसी नै सार्न लाग्यो ? अर्को विषय, विराटनगरबाट फोटोकपी समेत ल्याएर बहस गर्ने प्रयास किन गरिएन ? यो विषयमा पनि सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘उहाँहरूले फोटोकपी आदानप्रदान गरेको भए पनि हुन्थ्यो । आखिर हामीले पनि फोटोकपी मागेका हौँ । उहाँहरूले त्यो किन गर्नुभएन, उहाँको विषय हो ।’
कुनै पनि मुद्दाको सक्कल मिसिल अदालतमै हुन्छ । सिद्धबाबाको मुद्दाको मिसिल पनि जिल्ला अदालत सुनसरीमै थियो । त्यसको नक्कल मिसिल मात्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुने हो ।
अदालतमा नै सक्कल मिसिल भएकोमा सरकारी वकिलले फोटोकपीकै आधारमा पनि बहस गर्न सक्छन् । तर, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय तथा महान्यायाधिक्ताको कार्यालय मिसिल–मिसिल खेलेर बसे, त्यही ‘मिलेमतो’का आधारमा न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाबाट फैसला आएकोे कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ ।
त्यति मात्र होइन, उच्च अदालत विराटनगरले १७ मंसिरमा आदेश दिँदै सिद्धबाबाको मुद्दाको मिसिल जिल्ला अदालतबाट मगाउन भनेको थियो । ‘उच्च अदालतले मिसिल मागेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले फैसला गर्न कानुनी अड्चन थियो ।
त्यसैले उच्चले १७ मा दिएको आदेशको जानकारी जिल्ला अदालतमा २१ मंसिरसम्म पनि पुगेको थिएन, २२ मंसिरमा जिल्लाले सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको एक घन्टापछि मात्र उच्चको आदेश दाखिला भएको छ,’ जिल्ला अदालतकै स्रोतले भन्यो, ‘विराटनगरको आदेश सुनसरी पुग्न पाँच दिन लाग्यो, त्यो पनि अभियुक्तले सफाइ पाएपछि मात्र पत्र पुग्यो । उच्च अदालतबाट २२ गते बिहान १० बजे मात्र पत्र जारी भयो, ३ बजे सुनसरीमा दर्ता भयो । यसमा ठूलो प्रणाली सामेल छ ।’
फोटोकपीका आधारमा पनि मुद्दा लड्न सक्ने हुँदाहुँदै जिल्ला न्यायाधिवक्ताले किन पेसी सार्न लगाए ? किन मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छ भनेर विवरण प्रस्तुत गरे ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिलेसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग स्पष्टीकरण समेत सोधेको छैन, उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।
त्यस्तै प्रश्न प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि उठेको छ । सर्वोच्चकै एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले पहिलोपटक पेसी सार्न निवेदन दिनासाथ पीडितको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै अभियुक्तलाई सफाइ दिने न्यायाधीश कोइरालाको न्यायिक निष्ठा के हो ? प्रधानन्यायाधीशले अहिलेसम्म उनीमाथि किन छानबिन सुरु गरेका छैनन् ? किन स्पष्टीकरण् समेत सोधिएको छैन ? यसरी प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्, महान्यान्याधिवक्ता र नेपाल बार समेतले जिल्ला न्यायाधीशलाई दोषी पनि देखाउने र उनलाई उन्मुक्ति समेत दिने बाटो अख्तियार गरेका छन् ।’
खासमा बलात्कारका अभियुक्त सिद्धबाबा एक्लै छैनन्, उनको पछाडि पैसा छ, राजनीति छ र सिंगो राज्य छ भन्ने विभिन्न तस्बिरले पुष्टि गर्छन् । स्वयं राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नै सिद्धबाबाको आश्रममा पुगेकी मात्र छैनन्, नक्सा पास समेत नभएको आश्रमका भवन उद्घाटन गराउने मात्र होइन, प्रदेश १ सरकारबाट जग्गा, जंगल र बजेट समेत आश्रममा दिने काम भएका छन् । आश्रममा आएको र खर्च भएको पैसाको कुनै लेखाजोखा छैन ।